[Thursday, December 7th, 17] :: Cali Cabdalla Saalax oo lagu aasay tuuladii uu ku dhashay
Sanca (RH) Madaxweynihii horre ee Yemen Cali Cabdalla Saalax oo Isniintii lagu dilay caasimadda Yemen ayaa shaley lagu aasay tuuladii u ku dhashay ee Sanxaan ee Koonfurta Sanca.
Mareeg la yiraahdo Al-Mashaad Al-Yamni ayaa sheegtay in Aaska Saalax uu ka dhacay goob qarsoodi ah, waxaana ka qeybgalay eheladiisa iyo qaar ka mid ah deeganka oo loo oggolaaday in ay ka qeybgalaan aaska.
Nin magaciisa la qariyey oo ka qeybgalay aaska Saalax ayaa Websiteka Al-Mashhaad u sheegay in la diiday in taleefonno lala galo goobta aaska uu ka dhacayey, waxaase wargeyskan uu sheegay in uu warkaas ka xaqiijin illo kale oo madax bannaan.
Dhinaca kale, talefishanka Imaaraadka fadhiggiisa yahay ee SKY ayaa baahiyey in aaska Saalax uu ka dhacay habeenkii Talaadadii deeganka uu ku dhashay ee Sanxaan.
Sidoo kale Telefishanka ayaa sheegay Xutiiyinta in dalbadeen aaska Saalax in aysan ka soo qeybgalin taageerayaashiisa isla markaanna loo sameen aas qaran.
Warbaahinta Yemen ayaa sheegay aaska Saalax in lagu wareejiyey sarkaal ka tirsan xisbiga Saalax oo magaciisa lagu sheegay Yaxye Al Ra’y.
Cali Cabdalla Saalax oo 77 jir ahaa ayaa dalka Yemen soo xukumayey 33 sanno balse gu’gii carabta ee 2011-kii ayaa saameen ku yeeshay.
Xuutiyiinta ayaa sheegtay dilkiisa iyagoo ku eedeyay in uu ku kacay Khiyaano maadama uu la saftay xulufada Sacuudiga.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in colaadda Yemen ay gallafatay in ka badan 8,600 oo qof halka ku dhawaad 50,000 qof ay ku dhaawacmeen gaar ahaan markii xulufada Sacuudiga uu faragaliyey dalka Yemen 2015-kii.